Gigaset GX290: Tilmaamaha, Qeexitaanka iyo Qiimaha | Androidsis
Gigaset waa sumad Jarmal ah oo inta badan joogitaan yar ku leh warshadaha casriga ah ee casriga ah, laakiin hadda waxaan halkaan ku heynaa oo waxaan siineynaa doorkeeda ugu weyn ee fursaddan cusub tan iyo markii ay billowday Gigaset GX290.
Naqshadaynta mobiladani waa wax sidoo kale ka dhex muuqda astaamaha kale ee ay leedahay. Waad ku mahadsan tahay tan iyo dhammaan sifooyinka ay soo bandhigtay, waxay si toos ah ula tartami doontaa shirkadaha sida Energizer iyo Blackview isla qeybtaas.
1 Gigaset GX290 Tilmaamaha iyo Sooc
Gigaset GX290 Tilmaamaha iyo Sooc
Qalabkan cusub ayaa la socda a 6.1-inch shaashad muuqaal leh HD + xallinta 1,560 x 720 pixels, darajo u eg qaab biyo daadis ah iyo muraayad Corning Gorilla Glass 3 ah oo ka dhigaysa mid u adkaysata naxdinta, xagashada iyo xadgudubyada kale.
Gigaset GX290 sidoo kale wuxuu ku faanaa dhammaan awooda in Helio P23 chipset oo ka socda Mediatek Waxay ku siin kartaa oo qalabeyn kartaa xusuusta gudaha ee 32 GB iyada oo lagu taageerayo ballaarinta iyada oo loo marayo microSD. Si kastaba ha noqotee, xusuusta cipher-ka ee RAM lama shaacin, markaa waa wax aan gadaal ka baran doonno.
Android Pie oo ku jirta xaaladdeeda saafiga ah waxay ku socotaa boosteejada, halka shahaadada IP68 ay bixiso caabbinta biyaha. Isla mar ahaantaana, Waxay xirxiraan batari 6,200 mAh ah oo leh adeegsi deg deg ah oo kugu soo celinaysa wadada 0% ilaa 100% seddex saacadood gudahood. Waxay sidoo kale adeegsaneysaa tikniyoolajiyadda lacag-bixinta wireless-ka ah, sidaa darteed muhiim ma noqon doonto in lagu xiro saldhig si ay u qabato lacagta.
Xulashooyinka isku xirnaanta waxaa ka mid ah laba-band 802.11 a / b / g / n Wi-Fi (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 4.2, USB-C 2.0 dekedda taageerta OTG, A-GPS, iyo NFC. Aqoonsiga wajiga iyo akhristaha faraha ayaan ka maqnayn taleefanka, sidoo kale kamarad gadaal oo labalaab ah 13 iyo 2 MP iyo toogte hore oo 8 MP ah.
Qiimaha go'an ee taleefankan casriga ahi waa 299 euro marka laga reebo VAT.. Qiimaheeda, oo qodobkaan ugu dambeeya lagu daray, wuxuu gaarayaa ilaa 360 euro qiyaastii. Waa la arki doonaa suuqyada ay gaari doonto, laakiin Spain horeyba way u codsan kartaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Gigaset GX290 waa taleefan casri ah oo casri ah oo leh bahal 6,200 mah Mah
Misfit Vapor X: Smartwatch-ka cusub ee Wear OS